သက်ဝေ: သင်္ကြန် ဖိတ်စာ
SHWE ZIN U April 12, 2010 at 1:03 PM
Moe Cho Thinn April 12, 2010 at 1:17 PM
နှစ်သစ်မှာ အတာရေအေးနဲ့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့နော်..
ကိုရင်နော် April 12, 2010 at 1:31 PM
စောစောစီးစီး တစ်ပိုဒ်နှစ်ပိုဒ် ဝင်နွဲခဲ့ပြီဗျ..း)
rose of sharon April 12, 2010 at 1:51 PM
Thant April 12, 2010 at 2:21 PM
တစ်ခေါက်ရောက်သွားပြီးပေါ့....။ သံချပ်တွေရော ပုံတွေရော မိုက်တယ်....
Anonymous April 12, 2010 at 6:06 PM
အပျော်လေးတွေ ကူးစက်မျှဝေ သွားပါတယ် .
သက်ဝေရဲ့ သံချပ်တွေ တအားမိုက်တယ်...
ကလူသစ် April 12, 2010 at 8:39 PM
ဘယ်သူလဲ သူ့တို အဲ့ သူ့ကို ထိကပါးရိကပါးလုပ်တာ။ အိုးမဲသုတ်လိုက်ရမလား
တန်ခူး April 12, 2010 at 9:23 PM
ဟုတ်ပ… သက်ဝေတို့ များတော်ချက်နော်… တို့ က သံချပ်သာအားပေးတတ်တာ… အဲလိုတော့ မရေးတတ်လို့ … ဟိုးအရင်ကလို စင်ပေါ်မှာ ခေါင်းပေါ်မှာ အ၀တ်ကလေးစည်းပြီး ဒဲ့ဒိုးအကျီင်္လေးဝတ်ပြီး အားရပါးရ သံချပ်ထိုးနေတဲ့ သက်ဝေနဲ့ ပန်ပန်ကို မြင်ယောင်ကြည့်သွားတယ်… တို့ ကတော့ နောက်နားလေးက ခြေထောက်လေးဘယ်ထိုးညာထိုးနဲ့ဝေလေလေပေါ့…
ဇွန်မိုးစက် April 12, 2010 at 9:51 PM
ရွှေပြည်ဝေးကို ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကောင်းမှကောင်း..သံချပ်တွေ တစ်ဝကြီးနားထောင်ခဲ့တယ်။
ဟဲ...ဟဲ...ရေလောင်းဖို့ ချောင်းနေသူ :P
mae April 13, 2010 at 3:40 AM
တို့မမ သံချပ်လဲ ရေးတတ်တယ်၊း)
PAUK April 13, 2010 at 4:58 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း April 13, 2010 at 9:51 AM
သင်္ကြန်လာဖိတ်ရသလားဟဲ့..DJ နဲ့ပဲ သင်္ကြန်ကျနေကြ..မော်ဒယ်ကျောက်..သိလား...
Hmoo April 13, 2010 at 11:26 AM
အတူဆုံရတဲ့ သင်္ကြန်လေးဟာ အချိုဆုံးကဗျာ.
မေဓာဝီ April 13, 2010 at 4:07 PM
မသက်ဝေရဲ့ သံချပ်သွားဖတ်ခဲ့တယ်။ ရယ်ရတယ်။ အမ လက်သံပြောင်လိုက်တာ။ ကလူသစ်ပါ မနေရဘူး။ :P
pandora April 13, 2010 at 4:57 PM
အတူဆုံရတဲ့ သင်္ကြန်လေးမှာ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ပက်၊ ရေမြုပ်နဲ့ ဖြန်း၊ အိုးမဲသုတ်၊ ရေပူဖေါင်းနဲ့ပေါက်၊ ရေခဲထုပ်နဲ့ပါ ထု ပေးလိုက်တယ် ၀ုန်း ဖုန်း ဒုန်း အုန်း ခွပ် .. ဟင်းဟင်း.. အမှတ်တရပေါ့။
T T Sweet April 14, 2010 at 7:46 AM
အန်တီ သက်ဝေရဲ့ သံချပ်ကို သွားဖတ်ပြီးပြီ။ ရယ်လိုက်ရတာ။ ခေတ်ကြီးကို သရော်ထားတာ စုံနေတာပဲ။ သံချပ်အထိုးကောင်းတဲ့ ဒေါ်သက်ဝေကို ရေခဲရေနဲ့လောင်းသွားတယ်။ ဟီဟိ ... ဘာမှလဲ ဆိုင်ဘူး။
Hmoo April 14, 2010 at 8:32 AM
စုချစ် April 17, 2010 at 2:15 PM
အမသက်ဝေ... မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
nu-san April 18, 2010 at 1:28 AM
အမရေ.. အခုမှ ကမန်းကတမ်း blog လည်ထွက်ရတယ်.. သင်္ကြန်နဲ့ ဝေးတာ ကြာတော့လည်း သင်္ကြန်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့သလိုပဲ.. အဝေးကနေပဲ သူများတွေ ဆော့ကစားတာကို မျှော်နေရတော့တယ်.. ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ကတော့ ပြီးသွားပြီ။
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
khin oo may April 27, 2010 at 11:20 AM